Mafana Fo Te-hanangana Tsangambato Ho an’ilay Mpanao Ratsy Malaza Indrindra Anty Sarimihetsika Any Rosia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Novambra 2016 11:10 GMT
Sergei Bodrov Jr. Loharaono: Youtube.
Fotoana fohy taorian'ny Revolisiona EuroMaidan sy ny fakàna an-keriny an'i Krimea tamin'ny 2014, nanapa-kevitra i Roman Sergeev, lehilahy 36 taona, talen'ny trano mpamokatra rakitsary ao Mosko, fa hanatanteraka nofinofy efa ela: hanorina tsangambato ho an'i Sergei Bodrov Jr., ilay mpilalao izay namelona an'i Danila Bragov tao anatin'ilay rakitsary Rosiana Brat (1997) sy Brat II (2000) niondanan'ny maro. Noho i Rosia manohana ireo hetsika mpisintaka any atsinanan'i Okraina sady manao fampielezankevitra an'habakabaka any Siria, te-hanao an'i Bodrov Jr sy ny fahitany ny herin'ny Rosiana ananany ho tonga tsangambato i Sergeev sy ireo hafa mpamorona ny tetikasa “Brat Danila”: “Mihoatra noho ny hatramin'izay”, hoy ny soratr'izy ireo ao amin'ny tranonkalany, “tsaroanay ny filàna marika iray fanehoana ny fiarovana ny [tanin'i] Rosia sy ny vahoakany.”
Ankehitriny, taona roa mahery taty aoriana, nanomboka nahazo endrika ilay tetikasa: hatramin'ny nanombohan'ny fanentanana fanangonam-bola tamin'ny volana jona, nahangona mihoatra ny 300.000 robla, (4.650 Dolara), na manodidina ny 85 isan-jaton'ny 350.000 robla, tanjona tratrariny. (Io vola io dia ho an'ny fanomanana ny asa ho an'ny tsangambato fotsiny; raha raisina hatramin'ny hetra sy ny vidin'ny fanamboarana ny fananganana, tombanana ho 2.685.000 robla, na 41.622 dolara ny vidin'ilay tsangambato.)
Te-hanangana sarivongana varahina ao Maosko na St Petersburg, izay toerana nandraketana an-tsary ny Brat sy Brat II ireo ekipan'ny Brat Danila; any amin'ny tena toerana izay mbola mila fantarina tsara amin'ny alalan'ny fitsapankevitra natao tao amin'ny vohikalan'ny tetikasa sy amin'ny fiarahamiasa amin'ny manampahefan'ny tanàna. Amin'izao fotoana izao, mitarika ny fitsapankevitra an-tserasera i St Petersburg aminà elanelan'isa midadasika.
Ny lafy roan'i Brad dia milaza ny tantaran'i Danila Bragov, miaramila Rosiana izay niverina nody tao amin'ny fireneny rehefa avy niady tamin'ny Ady Voalohany tany Tsetsenia, ary nandray anjara tamin'ny vono olona mahery setra tany St Petersburg. Nanjary iray amin'ireo mpamono olona natahorana indrindra tao an-tanàna izy, mampiseho ny fihetsika mifantoka amin'ny tontolo “farany andrefana” nananan'ny heloka bevava voaomana tao Rosia tamin'ny 1990.
Mampiakatra ny lazan'i Bodrov Jr ny Brat Danila, na dia tapaka antenantenany tamin'ny 2002 aza ny fiainany sy ny asany, fony izy sy mpikambana 27 mpikambana ao amin'ny ekipa sarimihetsika namoy ny ainy tamin'ny fihotsahan'ny tany tany amin'ny tendrombohitr'i Caucase. Nitombo ny lova navelan'i Bodrov Jr taorian'iny fahafatesany nampalahelo iny, ary mbola mitoetra ho iray amin'ireo mpilalao sarimihetsika malaza indrindra amin'ny sarimihetsika taorian'ny vanimpotoana Sovietika i Bragov: ny endrik'i Bodrov Jr dia maneho karazana jiolahy-manindrahindra lehilahy- iray amin'ny hery, voninahitra ary tsy fivadihana – izay mitana toerana lehibe ao amin'ny fiarahamonina lehilahy Rosiana ankehitriny.
Ny hetsika Brat Danila dia tonga tao anatin'ny ezaka mivelatra kokoa nataon'ireo Rosiana manampahefana mba hanorina ho tsangambato ireo olo-malaza ara-tantara: vao haingana ny sarivongan'i Vladimir Lehibe no naseho tany ivelan'i Kremlin, ary tamin'ny volana Oktobra ny tanànan'i Oriol nanangana ny sarivongan'i Ivan-Ilay-Lozabe. Misy mihitsy aza eritreritra hanorenana ny sarivongan'i Mikhail Kalashnikov, mpamorona ilay basy mitondra ny anarany.
Toy izany koa, antenain'ny Brat Danila fa ilay tsangambato dia “hiaro ny sarin'i Danila ho toy ny vato fehizoro manandanja ho an'ny kolontsaina fitiavan-tanindrazana” ary “hamorona marika iray hanampy hitondra ny olona hivondrona.” Amin'ilay tetikasa pejy fanangonambola, ireo mpanorina ny Brat Danila manoratra hoe inoan'izy ireo fa “ho afaka hampiray ny olona sy hanao fanambaràna mazava momba ny hevi-pirenena [Rosiana] i Danila Bagrov”.
Ny kolontsaina Rosiana tsy namorona na inona na inona toa azy nandritra ny 15 taona. Niseho teo amin'ny efijery mandritra ny krizy lalin'ny firenena, Danila lasa tena modely amin'ny fomba fanohanana ny ankizy maro izay nitombo tao anatin'ny fotoana tsy nisy ray na zokilahy.
Ireo seho an-tsehatra fohy voalohany nataon'i Vasily Goncharov, mampiseho an'i Bodrov Hr miakanjo toa an'i Bragov, manao akanjo bà matevina ary mitondra kitapo babena. Ho atao amin'ny alimo ilay sarivongana ary hosokirina manara-drefy.
Ny seho an-tsehatra fohy sy famaritana ny momba ilay tsangambaton'i Sergei Bodrov, haorina ao Maosko na St Petersburg.
Hosoratana eo an-tongotr'i Bodrov Jr ny fehezanteny “mino aho fa ao anatin'ny fahamarinana no misy ny tanjaka” notsoahina angamba avy amin'ny sehatra malaza indrindra tao amin'ny Brat II, izay anontanian'i Danila ny Amerikana iray mikasika ny fifandraisana misy amin'ny vola, tanjaka ary fahamarinana.
Lazao amiko ry Amerikana, inona ny tanjaka. Tena ny vola ve izy io? Ny rahalahiko mteny hoe vola izy io. Manana vola be ianao, nefa inona no dikany? Mino aho fa mifandray amin'ny fahamarinana ny tanjaka: izay manao ny marina dia mahery! Nanambaka olona tsy manambola ianao, dia inona no tohiny – niha-nahery kokoa ve ianao? Tsia, tsy niha-nahery ianao, satria tsy marina ianao. Ary ilay olona nambakainao, marina izy. Midika izany fa mahery kokoa izy.
Eo afovoan'ny fihemoran'ny toekarena sy ny kabary tsara lahatra manohitra ny Amerikana avy amin'ireo manampahefana sy ny andrim-panjakana, moramora kokoa ny mahita ny antony mahatonga ny sarivongan ‘i Bodrov mety hanako amin'ny Rosiana.
Nahatsangana fisiana manan-danja teny anaty haino aman-jery sosialy ny Brat Danila, tamin'ny fitantanana kaontyInstagram, VKontakte, sy Odnoklassniki. Ao anaty lahatsary iray fampahafantarana eo amin'ny tranonkalany, mangataka amin'ireo mpankafy i Sergeev mba haka sary azy ireo manoroka ny namany sy ny ray aman-dreniny miaraka amin'ny tenifototra #БратДАНИЛА
Efa dodona ireo mpampiasa Instagram hampiasa ilay tenifototra mandritra ny volana hatramin'ny nanombohan'ny tetikasa.
Sary nalefan'i Брат Данила (@bratdanila) tamin'ny 9 Novambra 2016 tamin'ny 3:02 maraina PST.
Sary nalefan'i Брат Данила (@bratdanila) tamin'ny 15 Septambra 2016 tamin'ny 2:01 maraina PST